« Tsenaben’ny fiompiana » : nomena toerana ho fantatry ny rehetra ny masomboly | NewsMada
« Tsenaben’ny fiompiana » : nomena toerana ho fantatry ny rehetra ny masomboly
« Mamafisoa », tranombarotra iray mivarotra masomboly voafantina eto an-dRenivohitra, manampy ny sehatry ny fambolena. Fototra iray lehibe izany ho an’ny fampandrosoana, mampiova ny fari-piainan’ny Malagasy maro anisa izay any ambanivohitra.
Nandray anjara tamin’ny « Tsenaben’ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy » io « Mamafisoa » io nampiranty ireo karazana masomboly voafantina ao aminy. Hita ao avokoa ireo karazana masomboly maro : vary an-tanety, vary anaty rano, tsaramaso, katsaka, voanjobory, voanjolava, voan’anana isan-karazany, sns. Ara-dalàna ireo rehetra ireo rehefa avy nohamarinina ao amin’ny Foibe manamarina izany na ny Ancos (1). Ankoatra ny mpanjifa tsotra eto amin’ny faritra Analamanga sy avy any amin’ny faritra hafa, mividy masomboly ao amin’io tranombarotra ireo mpiara-miombon’antoka amina tetikasa any ambanivohitra, toy ny Catholic Relief Service (CRS), ny Loterana, ny Fondation Aga Khan, ireo ONG samihafa …
Ao koa ny zezika sy ny provandy
Ankoatra ny varotra, manome toromarika ny mpamboly ny ao amin’ny « Mamafisoa » amin’ny fomba fampiasana ireny masomboly ireny. Ny vary, ny katsaka ary ny tsaramaso ny tena be mpividy ao amin’io tranombarotra io. Eo amin’ny 7 t isan-taona eo ho eo ny lafo amin’ny vary, 3.000 Ar ny kilao ; 4 t isan-taona ny lafo amin’ny katsaka, 2.800 Ar ny kilao. Tamin’ny taona 2017, nandeha be ny katsaka fa olana kosa ny aretina vaovao mamely azy tonga eto amintsika ka ilàna fitandremana. Ankoatra ny varotra masomboly, hita ao amin’ny “Mamafisoa” koa ny zezika sy provandy.
“Mampirisika ny olona hamboly ny fisian’ny mpivarotra masomboly toy izao ary matetika anefa ny tantsaha, tsy mijery izany fa mamboly avy hatrany. Iaraha-mahalala anefa fa ilàna fikarakarana ny fambolena, manomboka amin’ny tany volena, ny fanaraha-maso ny voly sy amin’ny fotoana fiakaran’ny vokatra”, hoy ny teknisianina iray ao amin’ny MPE (2), nikarakara iny Fepa iny.